DivvyHQ: Nnukwu Mpịakọta Ọdịnaya na Ọdịdị | Martech Zone
Satọde, Satọdee 12, 2015 Douglas Karr
Ọ bụrụ na ị na-arụ ọrụ na ụlọ ọrụ ụlọ ọrụ, ịhazi ọdịnaya na igbu ya bụ isi maka atụmatụ azụmaahịa gị dum. Ihe ịma aka bụ ijikwa echiche, akụrụngwa, ọrụ, na nyochaa ọnọdụ mmepụta niile. UchechukwuIhe ikpo okwu na-enye ngwaọrụ niile dị mkpa site na nchepụta ruo na igbu. A haziri ikpo okwu maka ọdịnaya na mbipụta mgbasa ozi mmekọrịta.
DivvyHQ bụ igwe ojii, atụmatụ ọdịnaya na mmepụta arụmọrụ na-arụ ọrụ wuru iji nyere ndị na-ere ahịa na ndị na-emepụta ọdịnaya aka / hazie ahazi ma rụpụta nke ọma, ihe mgbagwoju anya na atụmatụ azụmaahịa. Ọrụ dị iche iche nke Divvy na-agwakọta kalenda ndị dabeere na weebụ, njikwa ọdịnaya yana mmekorita n'ịntanetị iji nyere ndị otu ọdịnaya ụwa aka ijide echiche ọdịnaya, ekenye ma hazie ọrụ ọdịnaya, mepụta ụdị ọdịnaya ọ bụla ma nọrọ n'elu usoro oge mmepụta.
Dashboard - Nweta foto ngwa ngwa nke ihe ruru, ihe emere na ihe ndị otu gị na-arụ ọrụ ugbu a.
Unlimited Ekekọrịta kalenda - Dị ka ọtụtụ ndị na-akọrọ kalenda dị ka mkpa ka ị na-gị ụwa haziri na gị otu na otu peeji nke.
Mfe Ọrụ njikwa - N’agbanyeghi otu otu gị, ma ọ bụ mgbagwoju anya nke usoro mmepụta gị, Divvy ga - enyere gị aka ịmepụta ọdịnaya gị, nke akwadoro ma bipụta nke ọma.
Typedị Ọdịnaya Ọ bụla - produce na-emepụta ihe karịrị naanị ọdịnaya dijitalụ. Jiri Divvy nyere aka na nhazi na mmepụta ụdị ọdịnaya ọ bụla ịchọrọ ijikwa.
Ọdịnaya / Social Publishing - Kpochapu ikpo okwu na ikpochapu ihe ndi ozo na ihe oyiyi ozugbo na Facebook, Twitter, na ndi ozo.
Debe Nnukwu echiche gị - knowsnye maara mgbe na onye echiche ọdịnaya nwere ike isi. The Divvy Parking Lot na-enye ndị otu gị ohere ịchekwa echiche ha ruo ụbọchị nzukọ ị ga-enwe na ị ga-aga.
Security - Debe ọdịnaya gị na nchekwa nke DivvyHQ etinyela.
Nwere ike ịnwale DivvyHQ n'efu site na edebanye na saịtị ha.
Tags: ntinye ọdịnayakalenda ọdịnayammekorita ọdịnayaihe di n’imeusoro ọdịnayausoro ihe omumedivvyhq